अस्पताललाई १९ लाख बुझाउँदा सकियो सम्पत्ति, थप १ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी
विराटनगर । सडक दुर्घटनामा परेका १७ वर्षीय छोराको उपचार गर्दा सुनसरीको बर्जु-५ बस्ने जलिल मियाँ सुकुम्बासी भएका छन् ।
छोरा जाबिर अन्सारीको उपचारका लागि ६ कठ्ठा जग्गा बेचेर ऋणसमेत खाईसकेका उनको अहिले घर मात्र बचेको छ । गत फागुन २ गते बिहान मोटरसाईकल दुर्घटनामा परेका जाबिरको (स्पाईनल कर्ड) मेरुदण्ड भाँचिएको थियो । उनको विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भईरहेको थियो । शनिबार मात्रै डिस्चार्ज पाएका उनको कम्मरमुनिको भाग चल्न नसक्ने अवस्था छ ।
छोराको उपचारका लागि जलिलले आफ्नो ६ कठ्ठा जग्गा बेचेर अस्पताललाई १९ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । सम्पत्तिको नाममा अब उनीसँग घर र त्यसले ओगटेको जमिन मात्र छ । अझै अस्पताललाई १ लाख ७० हजार रुँपैया तिर्न बाँकी रहेकोले त्यो तिर्न घरसमेत बेच्नेपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
‘छोराको उपचारमा भएभरको सबै जायजेथा सकियो’, उनले भने, ‘सास रहुन्जेल आश हुँदो रहेछ ।’ १७ वर्षीय जाबिर सुनसरीको भुटाहा मदरसामा कक्षा ७ मा अध्ययनरत छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले दैनिक ज्यालादारीसमेत गर्ने उनी स्थानीय आशिष अन्सारीको घर निर्माणमा उनले इँटा जोड्ने काम गर्दथे ।
फागुन २ गते ज्यालादारीको रकम माग गर्दै उनी आशिषको घर पुगेका थिए । तर, आशिषले आफूसँग साथमा पैसा नभएको र पैसा लिन जानुपर्ने भएकाले बाईकमा तेल हालेर ल्याउन जाबिरलाई अर्‍हाएका थिए । भीमपुरस्थित पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्न जाँदै गर्दा उनी दुर्घटनामा परेका हुन । बाईक अनियन्त्रित भई उखु बोकेको ट्रयाक्टरमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो ।
तेल हाल्न पेट्रोल पम्म जानुअघि जाबिर आफ्नो घर गएका थिए । आमाले मलाई खबर पनि गर्नुभएको थियो, दाजु सज्जाद अन्सारीले भने, ‘तर, म घर पुग्नुअघि नै उ निस्किसकेको थियो । पहिलोपटक फोन उठेन, दोश्रो पटक प्रहरीले उठायो ।’ घटनास्थलमा पुगेका स्थानीय प्रहरीले नै जाबिरको दुर्घटनाको खबर दाजुलाई सुनाएका थिए । लगत्तै एम्बुलेन्स मार्फत विराटनगरस्थित गोल्डेन हस्पिटल ल्याइएका उनलाई २ महिनासम्म भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरियो ।
करिब १२ दिनअघि मात्रै उनलाई अस्पतालको जेनेरल वार्डमा सारिएको थियो । सुरुसुरुमा केही नबोल्ने उनी बोल्न थालेपनि शरिर नचल्ने अवस्थामा छन् । अस्पतालको हेलचेक्र्याईले उनको अवस्था यस्तो भएको परिवारको भनाई छ ।
तीन महिनासम्म मेरुदण्डको उपचारपछि हाल जाबिरको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको छ । तर, उनको कम्मरमुनिको पुरै भाग नचल्ने भएको छ । बिरामी मृत्युको मुखबाट बच्न सफल भएपनि डिस्चार्जका लागि तिर्नुपर्ने पैसाको अभावमा आफुहरुलाई निकै समस्याको व्यहोर्नु परेको दाजु सज्जाद अन्सारीले बताए ।
तीन दिनअघि मात्रै अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी खरिद बापतको ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बिल परिवारले तिरेको छ । त्यसबेला फार्मेसीले अब करिब २ लाख तिर्न बाँकी रहेको बताए पनि शनिबार बिल तिर्न जाँदा छुटसहित थप ३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको दाजु सज्जादको भनाई छ ।
अस्पतालमा उपचाररत रहेको अवस्थमा उनलाई कोरोना संक्रमणसमेत भएको छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीबाटै उनी संक्रमित भएका छन् । संक्रमित अवस्थामै आफन्तले थप पैसा तिर्नसक्ने अवस्था नभएको बताएपछि शनिबार अस्पतालले उपचार खर्चमा २ लाख छुट दिँदै कोरोना उनलाई डिस्चार्ज दिएको छ ।
बिरामीको उपचारका लागि बर्जु गाउँपालिकाले १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अस्पतालको फार्मेसीले ७ लाख ७६ हजारको बिलमा १ लाख ७६ हजार छुट दिँदै ६ लाखमा कुरो टुङ्गयाएको छ । छोराले आफ्नो घरपरिवार हेरेर मर्न चाहन्छु भनेपछि लाख बिन्ती गरेर छोरालाई डिस्चार्ज गराएको आमा सरातुल खातुनले बताईन् । बिरामीलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या नरहेकोले होम आइसोलेसनमा राख्ने परिवारले जनाएको छ ।
अस्पतालले भने आफन्तहरुको लापरबाहीकै कारण बिरामी कोरोना संक्रमित भएको दावी गरेको छ । गोल्डेन अस्पतालका व्यवस्थापक जियाउल हकले धैरै मान्छे आएर भेटघाट गर्दा बिरामी संक्रमित भएको दाबी गरे ।
संक्रमितलाई धेरै समयसम्म अस्पतालमा राख्न जोखिमपूर्ण भएकाले आवश्यक छुट गरेर डिस्चार्ज दिएको उनको भनाई छ ।
शनिबार, २५ बैशाख, २०७८, साँझको ०७:१६ बजे
Sad to read the complete reality, i wish him all the best for getting well soon. And also i wish his family members to be more strong. Daju sajjad well done brother, god bless you! You doing great job.